Kaltanka Isku-aadka Koobka Horyaalka Yurub(Champions League) oo la Soo Saaray iyo Kooxaha Barcelona,Ac Milan oo Guruub Adag galay. - Cakaara News
Kaltanka Isku-aadka Koobka Horyaalka Yurub(Champions League) oo la Soo Saaray iyo Kooxaha Barcelona,Ac Milan oo Guruub Adag galay.
Jimce(CakaaraSport)Isku aadka Koobka Yurub(Champions League) oo la sameeyay iyo Kooxaha Barcelona,Ac Milan oo Guruub Adag galay. Waxaa la sameeyay isku-aadka koobka horyaalada naadiyada yurub waxaana loo qeybiyay ilaa 8 group waxaana qeybta ugu adag wada galay Barcelona,Ac Milan,Ajex iyo Celtic waana guruubka geerida sida la saadaalinayo. Kooxda Celtic ee dalka Scotland ayaa gashay Groupka geerida oo ay ku wada jiraan Ac Milan oo 7 jeer qaaday Koobka horyaalka yurub iyo 2da koox ee min afarta-jeer qaaday ee Barcelona iyo Ajax.
Kooxda Manchester-city ayaa ku biirtay Guruub ay hogaaminayso Horyaalka Yurub Bayern Munich oo haysata koobka,waxaana ku wehelinaya kooxda CSKA Moscow iyo naadiga reer Czech ee Victoria Plazen. kooxda Reer UK Arsenal oo markii 16-aad oo xiriir ah u soo baxday Tartanka Horyaalka koobkaan ayaa waxaa ay hogaaminaysaa oo kula jiro guruubkeeda Borussia Dortmund,Marseille iyo Napoli.
David Moyes iyo kooxdiisa Manchester-United ayaa ka mid ah Groupka Shakhtar Donetsk,Bayern Liverkusen iyo Real Sociedad. Chelsea ayaa ku jirta guruub aad u fudud waxaana kula jira Schalke,Basel iyo naadiga reer Romania ee Steaua Bucharest. Kulamada ugu horeeya koobkaan ayaa la ciyaaraya 17-ka iyo 18-ka bisha inagu soo aadan ee September. Guruubka ay ku jiraan Barcelona,Ac Milan ,Ajax iyo Celtic ayaa waxay ku guulaysteen 17 jeer koobkaan.
Celtic ayaa sanadkii 1967-dii ku guulaysatay koobkaan waxaana ay tahay kooxda ugu darajo hooseeso qeybtaan iyadoo Barcelona ay tahay hogaamiyayaasha guruubkaan,waxaa ku xiga Ac Milan halka 3-aad ay ku jirto Ajex. Real Madrid iyo Juventus ayaa wada galay hal guruub waxaaana labadaan naadi ay yihiin kooxaha ugu horyaalada badan dalalka Spain iyo Talyaaniga waxaana ku wehliyay kooxaha ka kala socda dalalka Turkiga iyo Denmark ee Galatasaray, FC Copenhagen.
“waa mid aan xiiseenaynay waana sanad muhiim noo leh oo aan ka qeyb qaadanno koobka horyaalda yurub ayu yiri Kabtanka Man city Vincent Kompany oo boggiisa Twitter-ka soo dhigay qoraalkaas. Sidoo kale agaasimaha ciyaaraha Man city Txiki Begiristain ayaa sheegay in ay wax wanaagsan ka sameen doonaan Champions League.
Kooxaha ingiriiska ayaa loolanka ugu culus waxay kala kulmayaan Borussia Dortmund,Marsielle iyo Napoli. Tababaraha Dortmund Jurgen Klopp ayaa sheegay in 2011 ay ku guul dareesteen inay ka badiyaan Arsenal ayaa sheegay inay isku dayi doonaan in sanadkaan ay isbadal ka sameeyaan natiijada ay kala kulmeen Arsenal oo ay isku guruub yihiin. Jose Mourinho ayaa isku daya inuu ku guulaysto koobka Champions League isagoo tababare u ah saddex koox oo kala duwan kadib FC Porto uu la qaaday 2004 iyo Inter Milan oo lix sanno kadib uu u qaaday koobkaan.
Macalinka cusub kooxda Manchester utd David Moyes oo aan waligiis guruubyada koobka Champions League aan arkin laakin sanadkii 2005 ayaa Everton waxaa lagu reebay is reeb reebka koobkaan oo ciyaartii labada lug ay Villareal la ciyaartay laga reebay tartankaan xilli everton ay kusoo baxday Kaalinta 4-aad ee ka qeyb galka koobkaan iyadoo sanadkaas ay shan koox dalka ingiriiska ugu qeyb galeen. Koobka Champions League Finalkisa ayaa wuxuu ka dhacayaa garoonka kooxda Benfica ee magaalada Lisbon ee caasimadda dalka Portugal.
Kooxaha ayaa isugu aaday sidaan. Group
A: Manchester United, Shakhtar Donetsk, Bayer Leverkusen, Real Sociedad Group
B: Real Madrid, Juventus, Galatasaray, FC Copenhagen Group
C: Benfica, Paris St-Germain, Olympiakos, Anderlecht Group
D: Bayern Munich, CSKA Moscow, Manchester City, Viktoria Plzen Group
E: Chelsea, Schalke, FC Basel, Steaua Bucharest Group
F: Arsenal, Marseille, Borussia Dortmund, Napoli Group
G: Porto, Atletico Madrid, Zenit St Petersburg, Austria Vienna Group H: Barcelona, AC Milan, Ajax, Celtic